Nabadoon Yuusuf Cali Boorre oo sheegay in DFS ay dhibaato ku heyso Beesha Biimaal | cowslafil news network
Nabadoon Yuusuf Cali Boorre oo sheegay in DFS ay dhibaato ku heyso Beesha Biimaal
Posted by cowslafil On July 18, 2014 1 Comment
Nabadoon Yuusuf Cali Boorre oo kamid ah Odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobalka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay tacadiyo baahsan u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobalkaasi.
Wuxa uu sheegay ciidamada loogu yeero ciidamada qaranka ay si qaab qabiil ah ay u beegsanayaan dadka u dhashay gobalka, gaar ahaan Beesha Biimaal.
Nabadoonka ayaa Madaxda dowlada federaalka ugu baaqay in ay wax ka qabtaan arintaan inta aysan xaalada faraha ka bixin, Beesha biimaal ayuu sheegay in ay la dagaalameyso Mooryaan kaga soo duulay gobolada dhexe oo dhibaato ku hayay shacabka ku dhaqan Gobolka Shabeelada hoose.
Hadalka Nanadoonka ayaa kusoo aadaya xilli dagaalada shabeelada hoose ay kusoo biireen dhinacyo badan oo dantooda ay tahay in ay boobaan deeganada Beelaha Biimaal iyo Digil ee Gobolka Shabeelada hoose.
Previous:Wararkii ugu danbeeyey ee Qasaarihii ka dhashay Dagaalka Deefow
Next: Kashifaad: Dilalka qorsheysan ee ka dhaca caasimda dalka oo la ogaaday cida ka dambeysa
12:50 am July 27, 2014